Imibandela Nezimo | Law & More BV
Law & More e-The Hague, (ngemuva kwalokhu “Law & More") Yinkampani yangasese enesikweletu esinqunyelwe esifakwe ngaphansi komthetho waseDashi, ngenhloso yokwenza umsebenzi wezomthetho. Law & More uyilungu lenethiwekhi ye-LCS yabameli.
Le mibandela ejwayelekile isebenza kuwo wonke ama-oda ekhasimende ngaphandle kokuthi ngaphambi kokuphela kwesivumelwano kuvunyelwene ngokubhala. Ukusebenziseka kokuphepha okuvamile kokuthenga noma ezinye izimo ezijwayelekile zeklayenti akufakiwe ngokusobala.
Yonke imiyalo yamukelwa futhi yenziwa yi Law & More. Ukusetshenziswa kweSigaba 7: 407 isigaba 2 seKhodi Yezwe YaseDashi akunakwa.
Law & More lenza izabelo ngokuya ngemithetho yokuziphatha yeDashiy Bar Association futhi iyazifeza, ngokuya nale mithetho yobumfihlo yeklayenti ngaphansi kwemininingwane yenkontileka etholakele.
Ukweluleka Law & More ungalokothi ubone ngamanani entela yanoma isiphi isenzo noma ukungenzi, ngaphandle kokuthi iklayenti lithole ukwaziswa ngenye indlela ngokubhala Law & More. Uma maqondana nesidingo sokuvulwa Law & More imisebenzi enikezwe abantu besithathu, Law & More izobonisana kusengaphambili neklayenti. Law & More ayinasibopho sokwamukela ukwehluleka kwanoma yiluphi uhlobo lwaleli qembu lesithathu futhi inelungelo, ngaphandle kokubonisana ngaphambili futhi egameni leklayenti noma yimuphi umkhawulo wesibopho engxenyeni yeqembu lesithathu elibandakanyeke kulo.
Noma yisiphi isikweletu se Law & More kukhawulelwe enanini, esimweni ngasinye kuzokhokhwa umshuwalense wesikweletu oqeqeshiwe kanye nenani lomshuwalense ofanele ngaphansi kokudonswa okusebenzayo. Uma, ngasiphi isizathu, kungekho nzuzo enikeziwe ngaphansi komshuwalense wesibopho sobuchwepheshe, isikweletu esivele ngenhla sikhawulelwe ku- € 5,000, -. Lapho ebuzwa mayelana (nesembozo esingezansi) ngu Law & More umshuwalense wemfanelo okhokhelwayo unikeze imininingwane. Iklayenti Law & More faka indiva maqondana nezimangalo ngabantu besithathu kuze kufinyelele kuleso sabelo.
Ukuze kwenziwe inkontileka iklayenti ukuze Law & More khokha imali (kanye ne-VAT). Imali ibalwa ngokuya ngenani lamahora asetshenziswe aphindwe ngenani lehora elisebenzayo. Izimemezelo ze Law & More nge-imeyili noma kuthunyelwe nge-imeyili ejwayelekile kumakhasimende futhi inkokhelo kufanele yenziwe kungakapheli izinsuku eziyi-14 ngemuva kosuku lwe-invoice.
Ngaphandle kwalesi sikhathi, iklayenti alisebenziseki ngokusemthethweni futhi likweleta i-1% ngenyanga. Umsebenzi owenziwe ungafakwa nganoma yisiphi isikhathi sokukhishwa ngu Law & More icala. Law & More unelungelo lokuthi iklayenti licele ukukhokha imali ebekelwa ngaphambi kwesikhathi.
Ukuphikisana nenani le-invoice kufanele kuthunyelwe esitatimendeni esibhaliwe kungakapheli izinsuku eziyi-14 ngemuva kosuku lwe-invoice lapho Law & More, yehluleka lapho isimemezelo sokugcina ngaphandle kokubhikisha samukelwa.
Ubudlelwano obungokomthetho phakathi kweklayenti kanye Law & More ingaphansi komthetho waseDashi.
Zonke izingxabano ezivela kulobu budlelwano bezomthetho ziyonqunywa yinkantolo efanelekile eThe Hague.
Zonke izimangalo ezingadonsela iklayenti ithuba Law & More, kuphelelwa yisikhathi kunoma yikuphi unyaka owodwa ngemuva kosuku ikhasimende eliqaphele ngalo noma okungenzeka ukuthi lalazi ngobukhona balamalungelo.